भिडियो: सधै दर्शकलाई किन रुवाउँछिन् शान्ति श्री परियार ? गुल्मी पुगेर आफु पनि रोईन् दर्शक पनि रुवाईन् – Gulminews
Home/भिडियो/भिडियो: सधै दर्शकलाई किन रुवाउँछिन् शान्ति श्री परियार ? गुल्मी पुगेर आफु पनि रोईन् दर्शक पनि रुवाईन्
भिडियो: सधै दर्शकलाई किन रुवाउँछिन् शान्ति श्री परियार ? गुल्मी पुगेर आफु पनि रोईन् दर्शक पनि रुवाईन्
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ चैत्र २४, आईतवार ०१:२१ मा प्रकाशित
गुल्मी । बोल मायाबाट एकाएक चर्चामा आएकी गायिका हुन शान्तीश्री परियार, त्यसपछि उनको ब्यस्तता यसरी बढयोकि लोक गित नसुन्नेले पनि लोक गित सुन्न थाले र यसलाई माया गर्न पनि थाले । बोल माया उनको करियरको टर्निङ प्वाइन्ट हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।
गुल्मी चेम्बर अफ कमर्स, गुल्मीको आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको पर्यटन तथा सास्कृतिक महोत्सब एंब ब्यापार मेला २०७५ करिब १० दिनसम्म चल्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये शनीबार पालो परेको थियो शान्तीको । उनै शान्तिले यस्तो गित गाउदै सबैलाई रुवाईन्, हेरौँ भिडियो: